Japana: Nitsena fanoherana henjana ny fihetsiketsehan’ny ankavanana hiringiriny manerana ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2018 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, русский, Español, Italiano, English
Polisy manara-maso ireo mpanao diabe manohitra ny mpifindra monina sy manohitra ny mpanao fihetsiketsehana eo akaikin'ny gara ao Tokyo, 14 Oktobra 2018. Pikantsary avy amin'ny video Youtube an'i Hootoo Hiroshi (ほうとうひろし).
Nikarakara fihetsiketsehana tao an-tanàn-dehibe manerana an'i Japana tamin'ny Alahady 14 Oktobra ireo vondrona manohitra ny fanavakavahana mba hanakana ireo andiana diabe ataon'ny vondrona mpanavakavaka ankavanana hiringiriny amin'ny fifindra-monina ao Japana, na dia nampanantena aza ny governemanta Japoney fa handray mpiasa vahiny 500.000 hanampy hiatrika ny tsy fahampian'ny mpiasa.
Nikarakara fihetsiketsehana manerana an'i Japana tamin'ny Oktobra 14 ny antoko politika somary vaovao, Japan First, anisan'izany ny tany Tokyo, Yokohama sy Kawasaki, ary tany amin'ny tanànam-paritra toa an'i Fukushima sy Fukuoka.
Nanapa-kevitra kosa ny vondrona manohitra ny fanavakavahana fa hidina an-dalambe ihany koa mba hanakana azy ireo, izay hita amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra fa marobe kokoa izy ireo noho ireo mpanao diabe ankavanana hiringiriny.
Tao anatiny sy ny manodidina an'i Ginza tao Tokyo, nanao fihetsiketsehana mampiroborobo ny fanavakavahana ny Japan First. Ary raha nihiaka izy ireo hoe “Mivoaha an'i Japana ny vahiny!” sy ny sisa, nisy olona maro kosa nilanja sora-baventy sy famantarana ahitana teny hoe ” Tsy handefitra amin'ny fanavakavahana i Ginza” ary hafatra mitovy amin'izany. (Tenirohy)” “Tsy misy fandeferana ho an'ny Diaben'ny Fankahalana 14 Oktobra“
Ny Antoko Japan First (日本第一党, Nippon Daiichi To) dia antoko politika ao Tokyo tarihan'i Makoto Sakurai, izay efa ela no malaza ho mpitarika ny netto-ukyo (ネット右翼), hetsika fankahalana antserasera ataon'ny ankavanana hiringiriny ao Japana.
Nandritra ny folo taona mahery, nitarika ny Zaitokukai, vondrona fankahalana natokana hanorisorenana ny foko Koreana sy ireo vitsy an'isa any Japana ihany koa i Sakurai. Manjaka ao amin'ny kaominina Japoney sasany ny fanorisorenana antserasera na mivantana mihatra amin'ireo vitsy an'isa ka fitondram-panjakana samihafa ao an-toerana no niezaka nametraka sy nampihatra ny didy hitsivolana momba ny kabarim-pankahalana.
Rehefa nahazo ny roa isanjaton'ny vatom-bahoaka tamin'ny fifidianana tao amin'ny governora tao Tokyo tamin'ny taona 2016 i Sakurai, ary koa fitantarana miavaka tamin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, dia nametraka ny Antoko Japan First tamin'ny fomba ofisialy izy, io no hery lehibe ambadiky ny diaben'ny mpanavakavaka tamin'ny Alahady.
Nanamarika ilay mpisera Twitter Hiroshi Hotoo, izay nitantara ny zava-nitranga Alahady tao Tokyo tamin'ny alalan'ny andiana lahatsary YouTube fa mihoatra lavitra amin'ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny mpifindra-monina ny isan'ny polisy:
Mpanao fihetsiketsehana manohitra ny mpifindra-monina manao diabe manerana an'i Ginza.
Mpandray anjara 100 teo no hita tamin'ny fihetsiketsehana.
Saingy teo amin'ny 1000 ireo polisy niambina azy ireo .#1014銀座ヘイトデモを許すな#NoPasaran1014#Ginza #Nationalist
Ny malaza tamin'ny diaben'ny mpanavakavaka tamin'ny Alahady 14 Oktobra, dia ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohitra nizara tenirohy iombonana, fa ny anaran-tanàna no tsy nitoviany, mba handaminana toerana hihaonana sy handrindrana ny hetsika. Iray amin'ireo tenirohy mavitrika indrindra tahaka izany ny “#1014横浜ヘイト街宣を許すな“, na “Tsy misy fandeferana ho an'ny Diaben'ny Fankahalana 14 Oktobra Yokohama.”
Nirohotra tao Tsurumi, tanàna iray ao Yokohama ireo mpanohitra mpanao fihetsiketsehana, mba haneho ny fanohanan'izy ireo ny mpifindra monina, sy hampitampim-bava ireo mpanao diabe ankavanana hiringiriny, izay somary vitsy ihany, toy ny tany Tokyo sy ny tanàna hafa.
-Nahazo fitantaram-baovao manerana ny firenena ny fihetsiketsehana, amin'ny tatitra fa nahazo valinteny mivaingana sy matanjaka avy amin'ireo mpikatroka mpanohitra ny fanavakavahana tao an-tanàna manerana an'i Japana ireo mpanao diabe manohitra ny fifindramonina.
Olona fito ihany no azon'ny famoriam-bahoaka manohitra ny fifindramonina tao Kumamoto. Tena faly mahita ny habetsahan'ny olona tamin'ny fihetsiketsehana manohitra izany. . #lifeinjapan #antiracist #japan #humanrights
Na dia hita fa vitsy aza ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny mpifindra monina, dia mbola notontosaina tao anatin'ny fandrindrana manerana ny firenena izany, ary nampitandrina ireo mpanao hevitra sasany fa tsy dia tena marefo ny ankavanana hiringiriny ao Japana.
Michael Penn ao amin'ny Sampam-baovao Shingetsu, nanamarika hoe:
… Mampiseho ny voka-pifidianana tao amin'ny governora tao Tokyo fa tsy vitsy an'isa araka ny heverinao i Sakurai. Nahomby ity fihetsiketsehana manohitra ity tamin'ny fandrisihana ny manam-pahefana ao amin'ny tanàna maro mba handany didy hitsivolana momba ny kabarim-pankahalana sy ny polisy nanjary manara-maso ny vondrona mpankahala.